Kufanele Uyihlele Nini I-logo Yakho? | Martech Zone
Kufanele Uyihlele Nini I-logo Yakho?
NgoLwesine, Juni 25, 2015 NgoLwesine, Juni 25, 2015 Douglas Karr
Iqembu elivela Sula Imiklamo ushicilele le infographic enhle enemicabango ethile mayelana nalokho odinga ukukwazi mayelana nokwakhiwa kabusha kwe-logo, izizathu zokuthi kungani kufanele wakhe kabusha, okunye okumele ukwenze nokungafanele ukwenze kabusha, amanye amaphutha we-logo, kanye neminye impendulo evela kochwepheshe bemboni.
Three Izizathu Ezine Zokuklama kabusha i-logo yakho
Ukuhlanganiswa Kwenkampani - ukuhlangana, ukutholwa, noma ukukhishwa kwenkampani kuzodinga uphawu olusha ukukhombisa inkampani entsha.
Inkampani Ikhula Ngaphandle Kobunikazi Bayo Bangempela - benkampani eyandisa ukunikela kwayo, njengokuletha imikhiqizo emisha, izinsizakalo, njll. Ukwakhiwa kabusha kwelogo yabo kungaba yindlela ephumelelayo yokubonisa ukuvela kwenkampani.
Ukuvuselelwa Kwenkampani - izinkampani ebezinesikhathi eside futhi zingadinga uphawu.
Ngingathanda ukufaka esinye isizathu! Izindawo zokubuka zamaselula kanye nezikrini zedijithali zencazelo ephezulu zishintshe ngokuphelele ukuthi i-logo yakho ibukwa kanjani. Sezadlula izinsuku zokuqinisekisa ukuthi i-logo yakho ibukeka inhle kokumnyama nokumhlophe emshinini wefeksi.
Kulezi zinsuku, ukuba nefayela le- -favicon iyadingeka kepha ingabukwa kuphela ngamaphikseli ayi-16 ngamaphikseli ayi-16… cishe akunakwenzeka ukubukeka kukuhle. Futhi ingahamba iye phezulu ize ifike esithombeni esibonisweni se-retina ngamaphikseli angama-227 nge-intshi. Lokho kudinga umsebenzi omuhle wokuklama ukuze ulunge. Ukusizakala ngezikrini zezincazelo eziphakeme kunesizathu esizwakalayo, ngombono wami, ukuthola i-logo entsha!
Uma ungazange uyakhe kabusha i-logo yakho eminyakeni embalwa edlule, i-logo yakho ingahle ibonakale isindala kunoma ngubani owenza ucwaningo online (cishe wonke umuntu!).
Tags: kucaceuphawu lwe-infographicukuhlelwa kabusha kwelogologo yakha kabusha i-infographickabusha
Akulungile… Awukho kuTwitter ngokwanele
I-Broadleaf Commerce: Tshala imali ngokwezifiso, hhayi ilayisense